Khasaarihii ugu badnaa oo Al-Shabaab xalay ka soo gaaray duqeymo ka dhacay 5 xarumood – Hornafrik Media Network
Khasaarihii ugu badnaa oo Al-Shabaab xalay ka soo gaaray duqeymo ka dhacay 5 xarumood
Weeraradii ugu badnaa ee dhanka cirka ah ayaa xalay ka dhacay degmooyin iyo deegaano badan oo dhaca koonfurta Soomaaliya, waxaana la soo sheegayaan meelo badan oo khasaare is kugu jira dhimasho iyo dhaawac ay ka dhalatay duqeyntaas.
Ugu horeyntii xarumaha la weeraray ayaa waxaa la sheegay inay gaarayaan ilaa shan xarumoo oo ku kala yaalla gobolada Shabeellada Hoose, Bay iyo Jubbada Dhexe,waxayna xarumaha la beegsaday Al-Shabaab u ahaayeen ku ay ku abaabulaan weerarada tooska ah, gaadiidka qaraxyada lagu xiro iyo kuwa lagu tashkiiliyo xubnaha is-miidaaiya.
Duqeynta koowaad ayaa fiidkii hore xalay waxay ka bilaabatay xarun ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaan lagu magacaabo Salagle, halkaas oo la sheegay inay ka socotay xaflad ay saraakiil ka tirsan Al-Shabaab tababar ugu soo xirayeen dagaalamayaal aan tiradooda la shaacin, balse halkaas tababar ku qaadanayey mudo labo bilood ah.
Saraakiil ka tirsan sirdoonka Soomaaliya ayaan ka soo xiganaynaa in duqeynta ka dhacday Salagle ay ku dhinteen saraakiil dhowr ah oo tababari jiray dagaalamayaasha weerarada toos ah qaada ee Al-Shabaab.
Dhinaca kale duqeynta xigtay ayaa daqiiqado uun kadib xalay ka dhacday duleedka degmada Jilib ee gobolka Jubbada Dhexe, waxaana lagu bartilmaameedsaday kolonyo gaadiid ah oo ka baxay Jilib kuna sii jeeday dhanka degmada Bu’aale ee isla gobolka Jubbada Dhexe.
Saraakiisha noo warantay ee ka tirsan sirdoonka Soomaaliya waxay sheegeen in gaadiidkaas la beegsay ay la socdeen Amiirro ajaanib ah oo ka tirsan Al-shabaab, isla markaana halkaas lagu burburiyey in ka badan shan gaari, wallow aysan xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay hadana waxay sheegeen inuu jiro khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Sidoo kale gobolka Bay waxaa la beegsaday isla xalay deegaan lagu magacaabo Buula-fuley, halkaas oo dhow gantaal lagu xarun la sheegay inay Al-Shabaab ku tababaraan dagaalyahano lagu magacaabo jugta culus oo qaaday weerarrada tooska ah, sida ay noo sheegeen saraakiisha sirdoonka Soomaaliya.
Degaanka Hargaysa-yarey ayaa isna ila seddax gantaal lagu dhuftay waana deegaan ay aad u joogaan Al-Shabaab, waxaana xarunta la beegsaday la sheegay inay ku sugnaayeen dagaalyahano badan, kuwaas oo mararka qaar duulaan ku qaadi jiray deegaano ka tirsan Jubbaland.
Deegaanka Haawaay ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa ka mid ah deegaanada ay xalay Al-Shabaab ku beegsadeen diyaaradaha dagalku, halkaas oo sida la sheegay lagu duqeeyey talis ciidan oo Al-Shabaab ay ku lahaayeen deegankaas, saraakiisha noo warantay waxay sheegeen in halkaas lagu dilay taliyihii deegaankaas u qaabilsanaa Al-Shabaab iyo sagaal dagaalame.
Saraakiisha ka tirsan sirdoonka dowladda Soomaaliya ee noo waramay waxay sheegeen in duqeymahaas ay iska kaa shadeen ciidamada kumaandooska Soomaaliya iyo kuwo reer Galbeed ah, in kastoo aysan xusin dal gaar ah, sidoo kale waxay wacad ku mareen inay sanadkan cusub kor dhi doonaan weerarada ay ku qaadaan Al-Shabaab, waa sida ay hadalka u dhigeene.
Xarumaha ay xalay la duqeeyey ayaa waxay sheegeen inay mudo sahminayeen, waxayna ku goodiyeen inay sanadkan waji cusub ku wajihi doonaan dagaalka Al-Shabaab.
Kenya oo saldhiggeedii ciidamada cirka u soo rartay dhanka Soomaaliya